Halatra sy fanendahana : Nandray fepetra iraisana ireo tompon’andraikitra isan-tsokajiny -
AccueilSongandinaHalatra sy fanendahana : Nandray fepetra iraisana ireo tompon’andraikitra isan-tsokajiny
Tsy mitsaha-mitombo ny fanendahana sy ny sinto-mahery indrindra indrindra fa ny halatra amin’ireny fananana iombonana ireny eto an-drenivohitra sy ny manodidina. Ny eo tratra, ny eo mipoitra ihany. Izany hoe, miseholany ny tsy fandriampahalemana eto Antananarivo sy ny manodidina.
Noho izay indrindra, nanatanteraka fivoriana ny teo anivon’ny « Organisation Mixte de Conception » na ny OMC, ahitana ny avy ao amin’ny « Prefet de Police », distrika ary ny zandarimaria, sy ny Faritra Analamanga mahakasika ny famongorana izany. Nivoitra tamin’izany fa tsy vitan’izy ireo irery izany fa tsy maintsy miara-miasa sy misalahy amin’ireo Vaomieran’ny fandriampahalemana eny anivon’ireo fokontany tsirairay eny amin’ireo distrika enina.
Araka izany indrindra, nampiantso ireo vaomiera teny anivon’ireo fokontany ny teo anivon’ny Faritra Analamanga sy ny « Préfecture de Police » amin’ny distrika ary ireo mpitandro filaminana (zandary, polisy ary miaramila) amin’ny fihainoana azy ireo amin’ny lafiny tsy fandriampahalemana isan-tokony. Tamin’izany indrindra anefa, nampahafantarina fa hisy ny fepetra iraisan’ireo tompon’andrikitra isan-tsokajiny hamongorana izany. Anisan’izany ny fampihetsehana tsy an-kijanona ny mpitandro ny filaminana, andro sy alina, eo koa ny fiambenana sy fanaraha-maso ireo faritra mena eto an-drenivohitra, fandraisana fepetra mikasika ireny karaoke sy bar ary trano fandihizana ireny, sns.
Namaly ny hetahetan’ireo avy eny anivon’ny fokontany kosa ny teo anivon’ny Faritra Analamanga amin’ny fampitaovana azy ireo amin’ny andraikitra sahaniny.
Ankoatra izay, nandraisana fepetra manokana ihany koa ny mikasika ireo halatra batery sy jiro ary plaques solaires amin’ireo lalana eny Fenoarivo, Rocade Andohatapenaka, sns. Hisy ny fanamboarana ireo andrin-jiro simba ary hisy ihany koa ny fandinihana ny fanoloana ireo nisy nangalatra. Hisy ihany koa ny fanamafisana ireo andrin-jiro sy ny fitoeran’ireo batery ataon’ny eo anivon’ny Faritra Analamanga izay hiarahany amin’ny ministera eo anivon’ny Prezidansa misahana ny Tetikasan’ny Filoham-pirenena sy ny Fanajariana ny Tany ary ny Fampitaovana (M2PATE), sns.
Hatreto mbola tsy naharenesam-peo ireo candida, mahakasika ny fanaovan-tsonia ny “dina ara-pitsipi-pitondran-tena sy fahitsiana ho an’ireo mpilatsaka hofidina”. Tsapa fa somary nangatsiaka ireo kandidà amin’ ny fandraisana anjara, taorian’ny fanomezana ny filankevitry ny fampihavanana malagasy ...Tohiny